Somalia online: Warbixin ku saaban Abaarta ka taagan degmooyin hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan. (Daawo Sawiro)
Warbixin ku saaban Abaarta ka taagan degmooyin hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan. (Daawo Sawiro)
Xaalad dhinaca Bini’aadanimada ah ayaa ka taagan degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan, kadib markii ay saameyn daran ku yeelatay abaarta saameysay inta badan gobollada dalka Soomaaliya. Wariyaha Shabakadda islaamiga ah Amiir Nuur Media ee wilaayada Hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay socdaallo ku marayay deegaano ka tirsan wilaayada ayaa soo sheegaya in Abaar xoogan ay ka taagantahay meelihii uu soo maray.
Meelaha ugu daran ee abaartu saameystay ayaa waxaa ka mid ah tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Buula-bare iyo Maxaas, halkaasi oo dadka reer miyiga ah ee ku nool ay dhaafeen wixii ay heysteen ee Xoolo ahaa, sidoo kalena ma jiro wax beer ah oo dadkaasi xilligan ay tacbanayaan maadaama fasalladii ugu dambeeyay aysan roobabku u di’in sidii loo baahnaa.
Dadka tuulooyinkaasi ku dhaqan ayaa walaalahooda Muslimiinta ah waxay ka dalbadeen inay gurmad lasoo gaaraan, waxayna sheegeen inay ku sabarayaan Abaarta saameysay, iyagoona ALLAH SWT weydiistay inuu abaarta ka dulqaado.
Guddiga Gurmadka Abaaraha ee wilaayada islaamiga ah Hiiraan ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa uu howlo raashiin qeybin ah ka sameeyay tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Buula-bare iyo Maxaas. Sii Akhri DAAWO SAWIRADA